8 Kana ari Sauro, akanga achibvumirana nokupondwa kwake.+ Pazuva iroro kutambudzwa+ kukuru kwakamuka paungano yaiva muJerusarema; vose kunze kwevaapostora chete vakapararira+ munzvimbo dzose dzeJudhiya neSamariya. 2 Asi varume vaitya Mwari vakanoviga+ Stefani, uye vakamuchema+ kwazvo. 3 Zvisinei, Sauro akatanga kutambudza ungano. Achipinda nechisimba muimba imwe neimwe uye, achizvuzvurudza varume nevakadzi, aivaisa kujeri.+ 4 Zvisinei, vaya vakanga vapararira vakapfuura nomunyika iyoyo vachizivisa mashoko akanaka eshoko racho.+ 5 Kana ari Firipi, akaburukira kuguta reSamariya,+ akatanga kuvaparidzira nezvaKristu. 6 Mapoka evanhu akanga achiteerera nomwoyo mumwe zvinhu zvaitaurwa naFiripi pavakanga vakateerera uye vakatarira zviratidzo zvaakanga achiita. 7 Nokuti pakanga paine vazhinji vaiva nemidzimu isina kuchena,+ iyoyi yaishevedzera nenzwi guru yobva yabuda. Zvakare, vazhinji vakanga vakaoma rutivi rwomuviri+ uye vakanga vakaremara vakarapwa. 8 Naizvozvo muguta iroro makava nomufaro mukuru.+ 9 Zvino muguta racho maiva nomumwe murume ainzi Simoni, uyo, izvi zvisati zvaitika, akanga achiita zvemashiripiti,+ achishamisa rudzi rweSamariya, achizviti akanga ari munhu anokosha.+ 10 Vose zvavo, kubvira kumuduku wavo kusvikira kumukuru wavo, vaimuteerera vachiti: “Murume uyu ndiye Simba raMwari, rinogona kunzi iGuru.” 11 Naizvozvo vaimuteerera nokuti akanga avashamisa kwenguva refu nokuita mashiripiti ake. 12 Asi zvino pavakatenda Firipi, akanga achizivisa mashoko akanaka pamusoro poumambo hwaMwari+ uye pamusoro pezita raJesu Kristu, vakabva vabhabhatidzwa, varume nevakadzi.+ 13 Simoni akavawo mutendi, uye pashure pokunge abhabhatidzwa, akanga aina Firipi+ nguva dzose; uye, akashamiswa paakaona zviratidzo nemabasa esimba makuru achiitika. 14 Vaapostora vaiva muJerusarema pavakanzwa kuti Samariya yakanga yagamuchira shoko raMwari,+ vakatumira Petro naJohani ikoko; 15 uye ivava vakaburukira kwavari, vakavanyengeterera kuti vawane mudzimu mutsvene.+ 16 Nokuti wakanga usati waburukira pana ani naani wavo, asi vakanga vangobhabhatidzwa muzita raShe Jesu.+ 17 Vakabva vaisa maoko avo pavari,+ ivo vakatanga kugamuchira mudzimu mutsvene. 18 Zvino Simoni paakaona kuti mudzimu wakapiwa nokuiswa kwemaoko evaapostora, akavapa mari,+ 19 achiti: “Ndipeiwo simba iri, kuti munhu wose wandinoisa maoko angu paari agamuchire mudzimu mutsvene.” 20 Asi Petro akati kwaari: “Sirivha yako ngaiparare newe, nokuti wafunga kuwana chipo chaMwari chepachena uchishandisa mari.+ 21 Hauna rutivi kana mugove munyaya iyi, nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari.+ 22 Naizvozvo, pfidza uipi hwako uhwu, uteterere Jehovha+ kuti, kana zvichibvira, ukanganwirwe kufunga kwomwoyo wako; 23 nokuti ndinoona kuti uri nduru inovava+ uye chisungo chokusarurama.”+ 24 Achipindura, Simoni akati: “Nditetererei+ kuna Jehovha kuti parege kuva nechinhu chimwe chete pane zvamataura chingauya pandiri.” 25 Naizvozvo, pavakanga vapupura kwazvo uye vataura shoko raJehovha, vakadzokera kuJerusarema, vachizivisa mashoko akanaka mumisha mizhinji yevaSamariya.+ 26 Zvisinei, ngirozi+ yaJehovha yakataura naFiripi, ichiti: “Simuka uende kumaodzanyemba kumugwagwa unobva kuJerusarema uchiburukira kuGaza.” (Uyu mugwagwa womurenje.) 27 Naizvozvo iye akasimuka, akaenda, uye tarira! kwaiva nomukuru mukuru+ wokuItiopiya,+ murume aiva nesimba aiva pasi paKandase mambokadzi wevaItiopiya, akanga ari mutarisiri wepfuma yake yose. Akanga aenda kuJerusarema kunonamata,+ 28 asi akanga ava kudzokera uye akanga agere mungoro yake achiverenga zvinonzwika bhuku romuprofita Isaya.+ 29 Naizvozvo mudzimu wakati+ kuna Firipi: “Swedera ufambe pamwe chete nengoro iyi.” 30 Firipi akamhanya ari parutivi, akamunzwa achiverenga zvinonzwika bhuku romuprofita Isaya, akati: “Unonyatsoziva zvauri kuverenga here?” 31 Iye akati: “Chokwadi, ndingadaro sei kana mumwe asingandirayiridzi?” Iye akakumbira Firipi kuti akwire, agare naye. 32 Zvino chikamu choRugwaro chaakanga achiverenga zvinonzwika chaiva ichi: “Segwai akaendeswa kunourayiwa, uye segwayana rinyerere pamberi pomuveuri waro, naizvozvo iye haashami muromo wake.+ 33 Paainyadziswa kutongwa kwakabviswa kwaari.+ Ndiani achataura mashoko echizvarwa chake? Nokuti upenyu hwake hunobviswa panyika.”+ 34 Achipindura, mukuru mukuru wacho akati kuna Firipi: “Ndinokukumbira, Muprofita ari kutaura izvi pamusoro paani? Pamusoro pake here kana kuti pamusoro pomumwe munhu?” 35 Firipi akashama muromo wake+ uye, achitanga noRugwaro+ urwu, akamuzivisa mashoko akanaka pamusoro paJesu. 36 Zvino zvavakanga vachienda vari mumugwagwa, vakasvika paiva nemvura zhinji, mukuru mukuru wacho akati: “Tarira! Mvura zhinji; chii chinonditadzisa kubhabhatidzwa?”+ 37 —— 38 Naizvozvo akarayira kuti ngoro imire, vakapinda mumvura, iye Firipi nomukuru mukuru wacho; uye akamubhabhatidza. 39 Pavakanga vabuda mumvura, mudzimu waJehovha wakakurumidza kubvisa Firipi,+ uye mukuru mukuru wacho haana kuzomuona, nokuti iye akaramba achienda zvake achifara. 40 Asi Firipi akawanikwa ava kuAshdhodhi, uye akapfuura nomunharaunda yacho, akaramba achizivisa+ mashoko akanaka kumaguta ose kusvikira asvika kuKesariya.+